5-ta ciyaar ee xisaabta ugu fiican ee Android | Androidsis
Haaruun Rivas | | Ciyaaraha Android, Mobiles
Waa wax aan macquul aheyn in la qiyaaso adduun aan xisaabtu ka jirin, sidoo kale way adag tahay in la sameeyo iyada oo aan lahayn xarfo ama luqadaha iyo luqadaha kala duwan ee jira si loo wada xiriiro. Oo iyagu aad bay lagama maarmaan u yihiin inay naga caawiyaan dhisidda dhismayaal, xisaabinta bisha dhammaadka iyo iibsashada cuntada, ogaadaan sida aan u caafimaad qabno, diyaariyo cunto karinta oo joojiyaan tirinta ... Meel kasta way joogaan, xitaa waxa aynaan rumaysan . Taasi waa sababta ay u wanaagsan tahay inay had iyo jeer joogaan, si wax looga barto iyo in maskaxda lagu dhaqo mar mar, iyo waxyaabo kale.
Sidaa darteed, hoos, waxaan ku taxnay 5-ta ciyaar ee xisaabta ugu fiican ee aad ka heli karto Android. Dhammaan waa bilaash waxaana laga heli karaa Google Play Store ee Android, marka lagu daro inay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee la soo dejiyo oo leh qiimeynta ugu fiican.
Hoos waxaad ka heli doontaa tiro ka mid ah ciyaaraha xisaabta ugu fiican ee casriga ah ee Android. Waxaa xusid mudan, sida aan had iyo jeer samayno, in dhammaan kuwa aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
1 Ciyaaraha Xisaabta
2 Dhibaatooyinka Xisaabta & Ciyaaraha
3 Orodyahanka Xisaabta Toon: Xisaab
4 Ciyaaraha xisaabta ee carruurta: isku darka iyo kala-goynta
5 Ciyaaraha Xisaabta
Waxaan ku bilaabaynaa Ciyaaraha Xisaabta, ciyaar ay muhiim u tahay in la ogaado xisaabta aasaasiga ah si loo ciyaaro. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan ahayn maskaxiyan, waxay weli kaa caawin doontaa inaad ku tababarto oo aad horumariso. Si la mid ah, dhibaatooyinka isku-darka, kala-goynta, kala-goynta iyo isku-dhufashada fudud, dhib badan kuma keento kuwa bilawga ah iyo xataa kuwa wax-garadka ah. Dhammaadka maalinta, tani waa ciyaar xisaabeed aad u xiiso badan oo si fiican u qabata shaqadeeda, taas oo ah inay dadka ka dhigto waqti ka duwan oo ay ka caawiso inay maskaxda ku hayso qaab wanaagsan.
Marka laga soo tago hawlaha xisaabeed ee hore loo sheegay, Ciyaaraha xisaabtu waxa kale oo ay ka muuqdaan dhibaatooyinka iyo layliga awooda iyo xididka labajibbaaran. Si kastaba ha ahaatee, uma baahnid xisaabiye si aad u xalliso, maadaama ay sidoo kale fududahay in la sameeyo. Dhanka kale, wax badan ayay kaa caawinaysaa in dhammaan hawlaha aad xalinayso ay yihiin xulashooyin badan: dhib kastaa waxay leedahay afar natiijo oo kala duwan, kuwaas oo mid keliya uu yahay ta runta ah waana ta ay tahay in la doorto si loo sii wado tan xigta. aan la garanayn.
Sidan, waxaad ku urursanaysaa dhibco oo aad hore ugu maraysaa ciyaarta taas oo dhibcooyinka xisaabeed iyo caqabadaha aan la koobi karin. U deji diiwaanada dhibcaha la helay wakhtiga ugu yar ee suurtogalka ah, oo garaac iyaga, adoo hagaajinaya caqligaaga iyo awoodaada inaad ku xalliso dhibaatooyinka tirooyinka. Waxay ku fiican tahay ardayda dugsiga hoose iyo dhexeiyo weliba qof kasta oo aqoon yar u leh xisaabta. Waxay sidoo kale ku habboon tahay dadka da 'kasta leh.
Dhibaatooyinka Xisaabta & Ciyaaraha
Barashada xisaabta waligeed may fududayn. Ciyaartan Android, waxaad heli doontaa madadaalo inta aad naftaada buuxinayso oo aad barato inaad xalliso dhibaatooyin badan. Hagaajinta xisaabta maskaxdaada oo ciyaar markaad wax baranayso.
Ciyaartan ayaa ka dhameystiran kana horumarsan tii hore, maadaama ay leedahay jimicsi kala duwan oo xoogaa dhib badan, inkastoo si isku mid ah loo sameeyay. Waxay ku habboon tahay dadka da' kasta iyo heer kasta, iyada oo aan loo eegin haddii ay yihiin dugsi hoose, sare ama jaamacad. Waana in, marka laga soo tago in ay leedahay isku-geynta, kala-goynta, isu-qaybinta iyo isku-dhufashada, waxa kale oo ay leedahay layliyo trigonometry, geometry analytical, horumarka, trigonometry diyaaradda, jajabyada, logarithms iyo mawduucyo kale oo badan iyo qaybaha xisaabta.
Mid ka mid ah sifooyinka ugu xiisaha badan ayaa ah taas tusiyaa layliyada la xaliyay talaabo talaabo ee layli kasta, markaa way ku habboon tahay in la barto oo la ogaado wax kasta oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ciyaartani kiciso. Intaa waxaa dheer, haddii taasi aysan ku filneyn, waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno dhibaatooyinka xisaabteena, iyo waxyaabo kale.
Orodyahanka Xisaabta Toon: Xisaab
U gudubka ciyaarta seddexaad ee liiskaan, waxaan heysanaa Toon Math Runner, cinwaan kale oo ku habboon barashada, hagaajinta iyo dhammaystirka aqoontii hore ee xisaabta. Iyo, sidii labadii ciyaarood ee hore, waxay ku habboon tahay da 'kasta iyo heer kasta oo waxbarasho, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon carruurta iyo dhalinyarada, iyada oo aan loo eegin haddii ay ku jiraan dugsi hoose, dugsi sare ama jaamacad.
Ma aha oo kaliya inaad xalliso mashaakil badan oo aan dhammaad lahayn adigoo saaraya oo dooranaya natiijooyinka saxda ah, laakiin sidoo kale waa inaad ogaataa oo aad ku dhejisaa lambarka u dhigma ee leh, isku-darka, isku-dhufashada, qaybinta, kala-goynta ama nooc kasta oo jimicsi ah si aad u ogaato sababta ay u siinayso natiijo gaar ah. Tan waxaa la samayn karaa inta aad marto dhammaan heerarka majaajilada iyo jilayaasha firfircoon ee ciyaarta, kuwaas oo ay tahay in ay ururiyaan dhammaan qadaadiicda, isla mar ahaantaana waa in ay fiiro gaar ah u dhibaatooyinka si ay u siiyaan xalalkooda. Maxaa intaas dheer, Toon Math Runner waa ciyaar xisaabeed Isbaanish ah.
Orodyahanka Xisaabta Toon: Mathe-Spiele
Developer: CIYAARAHA XISAABTA
Ciyaaraha xisaabta ee carruurta: isku darka iyo kala-goynta
Halka ciyaarta xisaabtan waxay si gaar ah ugu jihaysan tahay carruurta ilaa 12 sano jir ahMarka la eego dhibaatooyinka fudud iyo kuwa fudud ee carruurta dugsiga hoose, waxa kale oo ay si fiican u ciyaari karaan dhalinyarada iyo dadka waaweyn, iyada oo aan loo eegin heerka daraasadda, tan iyo, ugu yaraan, waxay u adeegi kartaa inay dib u soo celiso, marka la eego kuwa ugu da'da weyn iyo khabiirada tirooyinka. .
Cinwaankani waxa uu la socdaa layliyo isugeyn iyo kala-goyn badan si loo xalliyo, markaa waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inaad ku tababarto oo aad horumariso labada nooc ee waxqabadyada.
Si loo dhammeeyo qoraalkan ciyaaraha xisaabeed ee ugu fiican Android, waxaanu haynaa ciyaartan, mid sharaf weyn u leh ciwaanka isku-xidhkan.
Marka lagu daro tan caadiga ah, isku-darka, kala-goynta, isku-dhufashada iyo qaybinta, ciyaartani waxay sidoo kale la socotaa taxane, xujooyin, su'aalo kala doorasho badan iyo jimicsiyo iyo hawlo kale oo maskaxdaada qaabayn doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 5-ta ciyaar ee xisaabta ugu fiican ee Android
Kuwani waa 5-ta barnaamij ee ugu wanaagsan ee waqtigan lagu tafatiro fiidiyowyada Android